Kuya kuba kubi kakhulu ebholeni lakuleli - Ertugral | News24
Kuya kuba kubi kakhulu ebholeni lakuleli - Ertugral
Cape Town - Umqeqeshi we-Ajax Cape Town uMuhsin Ertugral ukholelwa ekutheni isimo sebhola laseNingizimu Afrika siya ngokuya siba sibi kakhulu.
Lo mqeqeshi odabuka eTurkey wafika kuleli ngo-1999 ezoqeqesha izinkunzi zaseSoweto, iKaizer Chiefs.
U-Ertugral useqeqeshe amakilabhu amaningi kuleli kwi-PSL, okubalwa iSantos, iGolden Arrows ne-Orlando Pirates.
Ngesikhathi ekhuluma ngemuva komdlalo lapho ezakhe ziguqiswe khona ngo-2-1 yiMamelodi Sundowns ngasekuqaleni kwaleli sonto, u-Ertugral uthe ukholelwa ekutheni izinga lebhola elidlalwa ku-Absa Premiership liyehla kunokuthi lenyuke.
OLUNYE UDABA: Udinwe uyaveva uMushin Ertugral
"Ngesikhathi ngifika okokuqala kuleli ngo-1999 lalihluke kakhulu ibhola elalidlalwa. Kepha manje, kunzima nje impela," esho.
"Indaba yebhola lakuleli iyadida kakhulu. Abadlali baholelwa imali eningi abangazi ukuthi bayenzeni. Bafuna ukuyodlala e-Europe, kepha ubani ozobayisa lapho?"
U-Ertugral ube eseyachaza ukuthi wamsiza kanjani lowo owayengukaputeni weCape Town City uLebogang Manyama ukuba asayine neqembu laseTurkey, iKonyaspor, wachaza nangokuthi lo mdlali ukuthola kunzima ukuthola ijezi.
Uphethe ngokuthi kumele sizibuze ukuthi kungani kungekho ngisho umdlali oyedwa wakuleli odlala kwiPremier League, iLa Liga, e-Italy noma kwiBundesliga.